Meccanoid G15 KS: Rakavhurika sosi robhoti rinotangwa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yekunyepedzera yeMeccano toy kambani iyo yakaunza kushinga kwakanyanya pakati pevana nematoyi ayo, ikozvino inopa chigadzirwa chitsva chinofadza vadiki kwete vadiki kudaro. Iyo yakavhurika sosi robhoti inonzi Meccanoid G15 KS. Iyo femu yagara ichiedza kugadzira matoyi ekugadzira kusimudzira mafungiro evashandisi uye vanga vachidawo kuchinjisa kuchimiro cheMeccanoid G15 KS.
Iyo Meccanoid G15 KS robhoti inogona kuve yekutanga kune mazhinji kubva kukambani yeMeccano kana iri kubudirira mumusika. Uye nekuda kwehunhu hwayo, zvinoita sekunge inoratidza kuti ine zviumbwa zvacho. "Toyi" yekudzidza nezve ino yazvino ndima uye kukurudzira kugona patinopinda izvi fashoni zvinonakidza zvakadaro.
Meccanoid G15 KS irobhoti rakagadzirwa kubva kuMeccano zvikamu, kuti igone kuchinjwa, uye zvakare nehurongwa hwayo. Mecca Brain inogona kugadzirirwa mukuda kwako. Iyo ine mabasa ekuzivikanwa kwenzwi, kutaura, kufamba, nezvimwe. Iyo inogona kutogadziridzwa neako smartphone kana piritsi (inowanikwa yeIOS uye Android).
Inotevera kudonha ichatanga kutengeswa nemutengo we $ 399, kunyangwe zano parakatangwa, zvirokwazvo vamwe vazhinji vachatanga kugadzira zvigadzirwa zvakafanana uye makwikwi anogona kudzikisira mitengo (muchokwadi isu tatozivisa chimwe chigadzirwa chakafanana cheLEGO mune ino blog).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Meccanoid G15 KS: Meccanoid's yakavhurika-sosi robhoti
OpenELEC 5.0 inosvika, zvichibva paKare 14